Maxaa looga hadlay shirka golaha wasiirada Jubbaland? – Bulsho News
Maxaa looga hadlay shirka golaha wasiirada Jubbaland?
Madaxweynaha ayaa golaha warbixin ka siiyay xaalada amniga iyo arrimaha doorashooyinka ee Jubaland oo meel Wanaagsan maraya gaar ahaan doorashooyinka xubnaha aqalka hoose, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada Jubbaland.
Wasaarada xanaanada xoolaha ayaa faah faahin ka bixisay xanuuno wakhtiyadii u danbeeyay ay ka cabanayeen dadka xoolo dhaqatada ah oo soo ritay xoolaha nool isla markana ay usii dheertahay abaaraha ka jira dalka.
Wasaarada ayaa soo bandhigtay hanaan wax lagaga qabanayo xanuunadaas isla markana daawayn loogu samaynayo xoolaha kala duwan ee lagu arkay xanuunadan.
Dhinaca kale Wasaarada haweenka iyo xuquuqul insaanka ayaa golaha warbixin ka siisay shaqooyinka Wasaarada ee hortabinta leh wakhtiyada soo socda.